Egwu Apple na-emegharị UI na White UI, egwu egwu, na nnukwu ihe osise? | Esi m mac
Egwu Apple na-emegharị UI na UI UI, egwu egwu, na nnukwu ihe osise?
Jesus Arjona Montalvo | | Egwuregwu Apple, Noticias, Asịrị
Egwuregwu Apple Ọ dịbeghị nso na iDevices anyị, mana akụkọ na-egosi na Apple na-akwadebe ịgbanwe ya n'ụzọ buru ibu. Ma ọtụtụ n'ime mgbanwe ndị a ga-abịa na onye ọrụ interface (UI). Dabere na akụkọ ọhụrụ sitere na '9to5Mac' yana isi mmalite ndị dị nso na ọrụ ahụ, a kọọrọ na Apple na-atụ anya na ọ ga-eme nnukwu mgbanwe na 'Nzukọ nke ndị mmepe mba ụwa'afọ a, nke ga-adị n'etiti June, Apple na-ezube ịmalite a E meghariri egwu Apple oge ụfọdụ ọdịda a.
Dabere na akụkọ ahụ nke ka bụ asịrị, Apple na-arụ ọrụ na ụdị egwu Apple ọhụrụ a kemgbe njedebe afọ gara aga. Mgbanwe ndị a na-eche ihu onye ọrụ interface, Akụkọ ahụ na-egosi na Apple chọrọ isi na ya pụọ ọcha na ọkara transperent imewe anyị nwere ugbu a, ma gbanwee gaa na ndị ọzọ oji na oji. Iji nyere dull ihuenyo, nke ihe atụ na-eji na iPhone mgbe ọ bụ na abalị mode.
Ihe ohuru a gha enyere aka kwalite ikike ịkekọrịta songs, na e kwuru na iji 3D Touch ga-agwakọta. Font nke akwụkwọ ozi 'San Francisco'Apple ga-agbasosi ike n'ime Apple Music na ọhụrụ imewe. Na mgbakwunye na ijikọ ikike ịmekọrịta Abụ egwu.
Ọ bụ ezie na a ga-emezigharị ọtụtụ ọrụ egwu Apple, ọtụtụ n'ime ya bụ ihe ịchọrọ, ya bụ ndụmọdụ maka abụ, ọba, ndị na-ese ihe, na vidiyo egwu. Akụkụ a ga-eme ka ọ dị mfe site na nkwalite dị mma iji mụbaa ojiji nke ọrụ a. Ọ bụ ezie na interface ga-agbanwe, arụmọrụ ga-eji algọridim yiri engine nkwanye.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Asịrị » Egwu Apple na-emegharị UI na UI UI, egwu egwu, na nnukwu ihe osise?
Netflix na-enye gị ohere ịgbanwe ogo vidiyo na njikwa data na iPhone
Oke nchebe maka MacBook gị na Tech21 Impact Snap Case